ဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ထိထိမိမိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ
HomeEntertainmentဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ထိထိမိမိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမှ ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဂယက်တွေ နဲ့ အတူ လူစိတ်ဝင်စားခံစားခဲ့ရတဲ့ Star Awards နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်လေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာလေးတွေ လာပါပြီ။ အဆိုပါ ပွဲရဲ့ Voting စနစ်ကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ များစွာ ရှိခဲ့တဲ့ အပြင် နှုတ်ထွက်မှုတွေ အတွက် ပွဲစီစဉ်သူတွေ ဖက်ကနေ Voting စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဖျက်သိမ်းမှုတွေ၊ နှုတ်ထွက်မှုတွေနောက်မှဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင် ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီးရေ။ အခုလို နှုတ်ထွက်ကြတဲ့ အပေါ်ကို Star Swards ရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးမြတ်ခိုင်က “Star Awards ရဲ့ဂယက်တစ်ခုကVoting စနစ်လို့ပြောလို့ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဦးမြတ်ခိုင်က….
“ အဲ့ဒီဟာကသပ်သပ်ဟီးရိုးထလုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ကျနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သူတို့နာမည်ကြီးအောင်ထလုပ်ကြတာ။ အဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်သွားကြတာ တော်တော်များများက။ အဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဖြေပေါ်ပါတယ်။ ထောင်ချောက်တစ်ခုအနေနဲ့နာမည်ကြီးအောင်ထလုပ်တဲ့လူတွေနောက်ကိုပါသွားကြတာ။ကျနော်တို့ကရိုးရိုးသားသားပဲ ဒီဟာကိုပေးမယ် ပြီးရင် ကျနောတို့ကအကုန်လုံးချပြလို့မရဘူး ။ချပြလို့မရဘူးဆိုတာက ကျနော်တို့မှာလည်း မမြင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်။ ပွဲကျမှဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ် ကျနော်တို့မှာ Plan တွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့အချင်းချင်းတောင်ကျနော်တို့အသိပေးမထားဘူး” လို့ အကုန်သိ မီဒီယာနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒဲ့ကြီး ပြောချပစ်လိုက်တာပါ။ အခု အချိန်မှာတော့ အဲ့ဒီ အင်တာဗျုးဖိုင်ကို ပြန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီလို့လည်း ဝေဖန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ “ဟီးရိုးထလုပ်ကြတယ်” ဆိုတဲ့စကားအပေါ်ကို ပထမဆုံး နှုတ်ထွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇဏ်ခီက ပြန်ပြီး အခုလို တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဟီးရိုး ထလုပ်တယ်” ဆိုပဲ..ကျနော်တို့ရဲ့ရပ်တည်မှုကိုသိပုံမရဘူး။ SMS နဲ့ Voting လုပ်တဲ့ကိစ္စကနေထွက်တာကျနော်စခဲ့တာဆိုတော့ကျနော်ရှင်းပြပါ့မယ်။ ကျနော်တို့ပုံတွေဖြုတ်ခိုင်းတဲ့မနက်က ကျနော်တို့ပုံတွေနဲ့အတူ SMS နံပါတ်တွေတွေ့တွေ့ချင်းစိတ်တော်တော်ပျက်သွားမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ vote လုပ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ ဒီသရုပ်ဆောင်တွေကို သူတို့ရဲ့ fan အချင်းချင်းပြိုင်ခိုင်းတာကို သဘောမတွေ့လို့ပါ။ နောက်အချက်တွေကတော့..
1. ကျနော်တို့ကိုကြိုတင်ခွင့်တောင်းခြင်း အသိပေးခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခွင့်တောင်းရကောင်းမှန်းမသိတာလား ခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးလို့တွေးတာလား ဆိုတာတော့ ကျနော်မမှန်းဆတတ်ပါဘူး။
2. ခွင့်တောင်းခဲ့သည်ရှိသော် ကျနော်တို့မှာငြင်းပိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ လူတစ်ဦးချင်းမှာ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
3. ငြင်းခဲ့ရင်လည်းပဲ ငြင်းပယ်ချက်ကို လေးစားမှုအပြည့်နဲ့လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပိုပြီးတော့တောင် နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသင့်ပါတယ်။
အခုဒီ interview ထဲမှာပြောသွားတဲ့ပုံကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် အနုပညာသမားတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကတော်တော် သေးတိမ်လွန်းပါတယ်။ Interview ကိုနားထောင်ပြီး အံ့သြမိသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ People’s Choice Award အတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အနုပညာသမားအများစုဟာ FB account မရှိလည်း အောင်မြင်နေပြီးသားသူတွေပါ။ အခုလိုရေးခြင်းဟာလည်း ဟီးရိုးထလုပ်တာမဟုတ်သလို like တွေ follower တွေတိုးအောင်လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ SMS voting တုန်းကနေထွက်သွားတုန်းကအကြောင်းအရင်းအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဆိုပြီး ရေးသားဖြေရှင်းလိုက်တာပါ။ အခုလို သူတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကပါ ဝိုင်းဝန်း ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေခဲ့ပြီ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီရဲ့ ဖက်မှာအားလုံး အပြည့်အဝ ရပ်တည်လျှက်ရှိနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကြားထဲကနေ ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ယုံကြည်ရာ အနုပညာလမ်းခရီးကို ဆက်လက်လျှောက်လမ်းနေကြတဲ့ ခီမောင်နှံ အတွက် စာဖတ်သူတွေလည်း အားပေးစကားလေး ပြောသွားခဲ့ပါဦး။
ဦးမွတျခိုငျ ရဲ့ အငျတာဗြူး ကို ထိထိမိမိ တုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ ဇဏျခီ
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကမှ ကငျြးပ ပွီးစီးခဲ့ပွီး ဂယကျတှေ နဲ့ အတူ လူစိတျဝငျစားခံစားခဲ့ရတဲ့ Star Awards နောကျဆကျတှဲ ဖွဈရပျလေးရဲ့ နောကျဆကျတှဲ အကွေောငျးအရာလေးတှေ လာပါပွီ။ အဆိုပါ ပှဲရဲ့ Voting စနဈကနေ နှုတျထှကျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှေ မြားစှာ ရှိခဲ့တဲ့ အပွငျ နှုတျထှကျမှုတှေ အတှကျ ပှဲစီစဉျသူတှေ ဖကျကနေ Voting စနဈကို ဖကျြသိမျးပေးခဲ့ရပါတယျ။
အဲ့ဒီလို ဖကျြသိမျးမှုတှေ၊ နှုတျထှကျမှုတှနေောကျမှဘာတှေ ဆကျဖွဈလာလဲဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျကွီးရေ။ အခုလို နှုတျထှကျကွတဲ့ အပျေါကို Star Swards ရဲ့ တာဝနျရှိသူ တဈဦး ဖွဈတဲ့ ဦးမွတျခိုငျက “Star Awards ရဲ့ဂယကျတဈခုကVoting စနဈလို့ပွောလို့ရလားဆိုတဲ့မေးခှနျးကို ဦးမွတျခိုငျက….
“ အဲ့ဒီဟာကသပျသပျဟီးရိုးထလုပျကွတဲ့လူတှရှေိတယျ။ ကနြျောပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ သူတို့နာမညျကွီးအောငျထလုပျကွတာ။ အဲ့ဒီထောငျခြောကျထဲကိုဝငျသှားကွတာ တျောတျောမြားမြားက။ အဲ့ဒါပွနျကွညျ့လိုကျရငျအဖွပေျေါပါတယျ။ ထောငျခြောကျတဈခုအနနေဲ့နာမညျကွီးအောငျထလုပျတဲ့လူတှနေောကျကိုပါသှားကွတာ။ကနြျောတို့ကရိုးရိုးသားသားပဲ ဒီဟာကိုပေးမယျ ပွီးရငျ ကနြောတို့ကအကုနျလုံးခပြွလို့မရဘူး ။ခပြွလို့မရဘူးဆိုတာက ကနြျောတို့မှာလညျး မမွငျရတဲ့စိနျချေါမှုတှရှေိတယျ။ ပှဲကမြှဘာလုပျမယျညာလုပျမယျ ကနြျောတို့မှာ Plan တှရှေိတယျ။ ကနြျောတို့အခငျြးခငျြးတောငျကနြျောတို့အသိပေးမထားဘူး” လို့ အကုနျသိ မီဒီယာနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဒဲ့ကွီး ပွောခပြဈလိုကျတာပါ။ အခု အခြိနျမှာတော့ အဲ့ဒီ အငျတာဗြုးဖိုငျကို ပွနျဖကျြပဈလိုကျပွီလို့လညျး ဝဖေနျမှုတှရှေိနခေဲ့ပါတယျ။
တဈဖကျမှာတော့ “ဟီးရိုးထလုပျကွတယျ” ဆိုတဲ့စကားအပျေါကို ပထမဆုံး နှုတျထှကျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈတဲ့ ဇဏျခီက ပွနျပွီး အခုလို တုနျ့ပွနျဖွရှေငျးလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
“ဟီးရိုး ထလုပျတယျ” ဆိုပဲ..ကနြျောတို့ရဲ့ရပျတညျမှုကိုသိပုံမရဘူး။ SMS နဲ့ Voting လုပျတဲ့ကိစ်စကနထှေကျတာကနြျောစခဲ့တာဆိုတော့ကနြျောရှငျးပွပါ့မယျ။ ကနြျောတို့ပုံတှဖွေုတျခိုငျးတဲ့မနကျက ကနြျောတို့ပုံတှနေဲ့အတူ SMS နံပါတျတှတှေတှေ့ခေ့ငျြးစိတျတျောတျောပကျြသှားမိတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲတှမှော vote လုပျတဲ့စနဈတှနေဲ့ ဒီသရုပျဆောငျတှကေို သူတို့ရဲ့ fan အခငျြးခငျြးပွိုငျခိုငျးတာကို သဘောမတှလေို့ပါ။ နောကျအခကျြတှကေတော့..
1. ကနြျောတို့ကိုကွိုတငျခှငျ့တောငျးခွငျး အသိပေးခွငျးလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခှငျ့တောငျးရကောငျးမှနျးမသိတာလား ခှငျ့တောငျးစရာမလိုဘူးလို့တှေးတာလား ဆိုတာတော့ ကနြျောမမှနျးဆတတျပါဘူး။
2. ခှငျ့တောငျးခဲ့သညျရှိသျော ကနြျောတို့မှာငွငျးပိုငျခှငျ့ရှိရပါမယျ။ လူတဈဦးခငျြးမှာ လှတျလပျစှာဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။
3. ငွငျးခဲ့ရငျလညျးပဲ ငွငျးပယျခကျြကို လေးစားမှုအပွညျ့နဲ့လကျခံနိုငျရပါမယျ။ အထူးသဖွငျ့ စာနယျဇငျးသမားတဈယောကျအနနေဲ့ ပိုပွီးတော့တောငျ နားလညျလကျခံနိုငျစှမျးရှိသငျ့ပါတယျ။
အခုဒီ interview ထဲမှာပွောသှားတဲ့ပုံကိုကွညျ့ခငျြးအားဖွငျ့ အနုပညာသမားတှပေျေါမှာထားတဲ့စိတျကတျောတျော သေးတိမျလှနျးပါတယျ။ Interview ကိုနားထောငျပွီး အံ့သွမိသလို စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ။ People’s Choice Award အတှကျထညျ့သှငျးထားတဲ့အနုပညာသမားအမြားစုဟာ FB account မရှိလညျး အောငျမွငျနပွေီးသားသူတှပေါ။ အခုလိုရေးခွငျးဟာလညျး ဟီးရိုးထလုပျတာမဟုတျသလို like တှေ follower တှတေိုးအောငျလုပျနခွေငျးမဟုတျပါဘူး။ SMS voting တုနျးကနထှေကျသှားတုနျးကအကွောငျးအရငျးအတိုငျးပါပဲ။ ကိုယျ့သိက်ခာကိုယျကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျခွငျးဖွဈပါတယျ ခငျဗြား။
ဆိုပွီး ရေးသားဖွရှေငျးလိုကျတာပါ။ အခုလို သူတုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ အပျေါမှာတော့ ပရိသတျတှကေပါ ဝိုငျးဝနျး ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနခေဲ့ပွီ ဇဏျခီနဲ့ ခရဈစတီးနားခီရဲ့ ဖကျမှာအားလုံး အပွညျ့အဝ ရပျတညျလြှကျရှိနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ တိုကျခိုကျမှုတှေ ကွားထဲကနေ ကွံ့ကွံ့ခံရငျး ယုံကွညျရာ အနုပညာလမျးခရီးကို ဆကျလကျလြှောကျလမျးနကွေတဲ့ ခီမောငျနှံ အတှကျ စာဖတျသူတှလေညျး အားပေးစကားလေး ပွောသှားခဲ့ပါဦး။